နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ။ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ။ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
Posted by ထားဝယ်ဝယ်ရဟန်းငယ် at 7:43 PM
No comments: အပြည့်စုံဆက်ဖတ်လိုက်ပါ
DAWEI PAGODAS - ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်
Posted by ထားဝယ်ဝယ်ရဟန်းငယ် at 7:42 PM
Posted by ထားဝယ်ဝယ်ရဟန်းငယ် at 7:41 PM
Posted by ထားဝယ်ဝယ်ရဟန်းငယ် at 4:31 AM
Posted by ထားဝယ်ဝယ်ရဟန်းငယ် at 4:13 AM
!! တနင်္သာရီတိုင်းသားများ!! ထားဝယ်ရဟန်းငယ် ကမ်းရိုးတန်းဆည်းဆာ ထားဝယ်လူထုအသံ ရွှေဝယ်ပြည် ထားဝယ်သား ကနက်သီရိသားလေး တနင်္သာရီသား D D A ရောင်စဉ်ငြိမ်း ထားဝယ်စီမံကိန်း အနှိုင်းမဲ့အလင်း ရွှေရောင်းမော် ကော့သောင်း အထက ၁ မြိတ် ပုလဲမြေ ကမ်းရိုးတန်းသစ္စာ
!! ဘောလုံးပွဲဆိုဒ်များ!!ဘောလုံးချစ်သူများချဲလ်ဆီးချစ်သူများကြိူးကျာနီတို့ဆုံမှတ်မြန်မာဂိုးဘော်လုံးဂိုးသတင်းများဘော်လုံးပေါက်ကြေးခုကန် ခုကြည့် ဘောလုံးဆိုဒ်မြန်မာပရီးမီးယားလိပ်soccermyanmar.ကမ္ဘောဇအသင်းမန်ယူအသင်းအလင်းတန်းဂျာနယ်မြန်မာတိုင်းဂျာနယ်
!! ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆိုဒ်များ!!မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုခြင်း ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်း သိမှတ်ရာရာများဗုဒ္ဓဟောကြားသူတော်ကောင်းတရားများဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ့ လောကအသင်းကြီးဓမ္မလက်ဆောင်ဓမ္မအလင်းရောင်ဓမ္မရနံ့ ဓမ္မအရိပ်သစ္စာအလင်းဓမ္မလင်းရောင်ခြည်ဓမ္မဌာနေဓမ္မဟေ၀န်ဓမ္မစကားဓမ္မမေတ္တာဓမ္မကုန်းမြေဓမ္မဒါန ဓမ္မဥယျာဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း(စင်္ကာပူ) ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက်ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ်ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)အရှင်လောကနာထဝိမုတ္တိရသမြန်မာထေရ၀ါဒမနက်ဖြန်
!! မြန်မာမဂ္ဂဇင်းဆိုဒ်များ!!ကောင်းကင်မဂ္ဂဇင်း မာယာမဂ္ဂဇင်းမြတ်ရတနာ ဓမ္မမဂ္ဂဇင်းလောကအလှအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းပါမောက္ခ ပညာရေးမဂ္ဂဇင်း ရွေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းသံလွင်အိမ်မက်မဂ္ဂဇင်း သံတော်ဆင့်မဂ္ဂဇင်းPeople MagazineCEO မဂ္ဂဇင်းBurmese Magazine Journals Digest
!! ဆက်သွားသင့်တာတွေ !! ကမ်းရိုးတန်းသစ္စာ
ရေးပြီးသမျှထဲမှအလှည့်ကျ ၆ ခု
ဘယ်ကိုမှကြွစရာမရှိတာနဲ့ထိုင်းဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းပွဲကို ဗဟုသုတအလို့ ငှါလိုက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ မနက်၎ နာရီခွဲကနေပြီးကားနှစ်စီးနဲ့သံဃာအပါးတရာကြွ ...
နှစ်ပေါင်းများစွာသဘာဝအလျောက်လှပနေသောကန်းခြေ တစ်ခုပါ။တခြားနာမည်ကြီးကန်းခြေတွေလိုပကာသနတွေ မရှိပေမဲ့ သဘာဝအလှတွေနဲ့ တည်ရှိနေတာပါ။ သဘာဝကိုဖျက်ရင...
ရာဇ၀င်မှတ်တမ်းထဲကသူရဲကောင်းတွေရဲ့ လက်တွေဟာ သွေးစွန်းခဲ့ကြတာများတယ်။ ...
ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ သရဲ(ထိုင်းအတွေ့အကြုံများအပိုင်း ၂)
ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ သရဲ(ထိုင်းအတွေ့အကြုံများအပိုင်း ၂) ထားဝယ်ရဟန်းငယ် ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတာကြာလာတော့ထိုင်း...
မင်္ဂလာဆောင်မှာကျတဲ့မျက်ရည် စာရေးသူဒီနှစ်တရုတ် နှစ်သစ်ကူးမှာ ဘယ်မှမသွားဘူး ကျောင်းမှာပဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့ မယ်လို့စိတ်ကူးတုံးရှိသေး...
ထိုင်း အင်္ဂလိပ် စကားပြော
ထိုင်း+အင်္ဂလိပ်စကားပြောနည်းလေ့ လာလို့ရအောင်မှတ်စုအနေနဲ့တင်ထားလိုက်တာပါ။ ဘာသာစကားပေါင်းစုံသင်ပေးနေတဲ့ဆိုဒ် တွေကို လေ့လာချင်ယင် ဒီမှာ သွားကြည်...
မဆုံသောလမ်း သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှထွက်မြောက်ပါရလို၏ သာမဏေ၀တ်စတုန်းကဆိုခဲ့ရတယ် အဲဒီတုန်းကငါ..သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲဆိုတာ ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်...
ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သမားတိုင်းလိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ။ ဆော့ဝဲတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းသုံးနေယင်ကြာလာတော့ငြီးငွေ့လာ တတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင် ဒီမှာ...
ကလေး +အလုပ်+ငိုသံ=ဘ၀ လူလားမမြောက်သေးတဲ့ကလေးကို လောကဓံတွေကခိုစီးလို့ ...
မင်္ဂလာဦးဆွမ်း အဝေးကိုရောက်နေတဲ့သင်းကျွန်းရွာကသူတွေအတွက် မင်္ဂလာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုတင်...
လူထုနဲ့အတူ "သံဃာတော်တွေအနေနဲ့မဲပေးခွင့်မရှိပေမဲ့ NLD ဒီကိုမဲထည့်ဖို့တော့တိုက်တွန်းခွင့်ရှိတယ်" (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
PDF ကနေ Word ကို ပြောင်းလဲတဲ့ ဆော့ဝဲလ် လိုလို့ လိုက်ရှာနေတာ တစ်ခုမှ အဆင်ပြေပြေ မတွေ့ပါဘူး။ ဒီနေ့တော့ Pdf to Word ဆော့ဝဲလ်တစ်ခု ရခဲ့တယ်။ သံ...
သူများကိုကွန်ပျူတာပြပေးတဲ့အခါ ကိုယ်သိတာလေးတွေမေ့နေတတ်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွယ်ကူအောင် ဒီမှာ သွားကြည့်သင့်တယ်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဘေးရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေ။. Awesome Inc. theme. Theme images by compassandcamera. Powered by Blogger.